Ururka shaqaalaha ambalaasyada oo dalbaday gaashaan fiican - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ururka shaqaalaha ambalaasyada oo dalbaday gaashaan fiican. Foto: Leif Johansson/Sveriges Radio
Ururka shaqaalaha ambalaasyada oo dalbaday gaashaan fiican
Publicerat onsdag 12 november 2014 kl 16.00
Ururka shaqaalaha ambalaasyada oo dalbaday in ammaankooda kor loo qaado. Ururkan ay ku midoobeen shaqaalaha gaadiidka caafimaadka wada ayaa codsaday in ay helaan qalab ka difaacaya wixii dhib ah ee ay la kulmi karaan.
Sidaas waxa maanta qoray jarriiradda Dagsblaget. Henrik Johansson oo ah guddoomiyaha ururkan ay ku midoobeen shaqaalaha ambalaanska ka shaqeeya ayaa sheegay in shaqaaluhu u baahan yihiin in ay helaan koofiyado iyo funaanado kuwa difaaca ah oo aanay waxyeelo soo gaadhi karin iyo in ay helaan qalabka afka iyo sanka lagu xidho ee qiiqa ama gaasta lagaga gaashaanto. Qalabkaas ayuu sheegay in ay tahay in hoggaanka degmo kastaa u iibiso shaqaalaheeda.
Henrik Johansson waxa uu sheegay in ay shaqaalaha ku adag tahay in ay tagaan goobaha qaar, siiba meelaha ay rabshaduhu ka dhacaan. Maxaa yeelay, waxa ay khatar ugu jiraan in ay dhib weyni la kulanto. Ugu danbayntii ururka shaqaalaha ambalaansyadu waxa uu magaalooyinka waa weyn u soo jeediyay in ay ammaanka shaqaalahooda kor u qaadaan gaar ahaan meelaha ay dagaaladu ka dhacaan.